Talo ku socota – Qoraaga – Abdi Mustafe, | Somaliland Today
← “Madaxweyne Ku-xigeenka Ayaa Xalay Gurigiisa Xildhibaanada Kula Shiray Isagana Masuul Ka Ah Kalfadhiga Buuxsami Waayay”. Guddoomiye Cirro
waxqabad miise xaraash marxuum sheekhbashiir. →
Talo ku socota – Qoraaga – Abdi Mustafe,
Qoraaladaada laqanyada badan dad ku wuu wada arkay, waana lagugu bartay oo si waanaagsan baa laguu yaqaan. Laakiin waxa aan wali lagaa arag fagaare, kamrad, iyo mala’ dad buuxo oo lagugu taageero. Talada aan jeclahay inaan kuu soo gudbiyaa waa soo ban bax oo daaha dabadiisa ka soo bax, noqo siyaasi xoog badan oo siyaasiyiinta kale naqdiya. U badheedh indhaha dadka iyo Kamradaha oo kalyo yeelo. Dadka aad wax ka sheegtaa way ku dhaamaan waayo, sax iyo qaladba dadka ayay hortaagan yihiin. Waxay qoraan ama yidhaahdaan bay is barbar taagaan.
Hadii aad qoraa tahay, Sahafi ah oo jecel inuu runta iyo tiisaba soo bandhigo, waxaad qortid barbar istaag oo muuqaaga iyo meesha aad joogtidba ka soo muuqo. Laakiin waxna waan sheegayaa, aniguna waan dhuumanayaa meesha ma qabato.
Fulaynimada iska daa oo cidda aad tahayba, bal soo bax aan ku aragnee. Taa macnaheedu maaha in wax yeelo ku gaadhayso. Laakiin waa dhiiranaan waxa aad qorto aad isku barbar taagayso. Qoraalku anshax buu lee yahay markaa inaad anshaxiisa mariso way fiican tahay, si dadka aad wax ka qorto ee aad jeceshahay in la anshax mariyaa inoogu wada qabsoonaam.
Wa bilaahi Toofiiq.